नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : बानेश्वर लाई रणभूमि बनाउने, जनता र कार्यकर्ता लाई प्रहरीसँग भिडाउने, टाउकाहरू फुटाउने ! के यो अपराध मात्रै हो ? राष्ट्र द्रोह होइन र ??
बानेश्वर लाई रणभूमि बनाउने, जनता र कार्यकर्ता लाई प्रहरीसँग भिडाउने, टाउकाहरू फुटाउने ! के यो अपराध मात्रै हो ? राष्ट्र द्रोह होइन र ??
हुन पनि बहुरूपीहरूका कुरा सुन्दै देख्दै वाक्क दिक्क लाग्ने । आफै सरकारमा, आफै सडकमा । आफै माग्ने, आफै हुन्छ भन्ने, आफै हुन्न भन्ने, बिहान एउटा, दिउँसो अर्को, साँझ फेरि अर्को, बोली फेरि रहने, बालुवाटारमा एउटा निर्णय, पार्टी कार्यालय र घर पुग्दा अर्को निर्णय, आफू सत्तामा हुँदा जे पनि हुन्छ, विपक्षमा पुगे पछि हुन्न वा अनिर्णीत । बानेश्वर लाई रणभूमि बनाउने, जनता र कार्यकर्ता लाई प्रहरीसँग भिडाउने, टाउकाहरू फुटाउने ! के यो अपराध मात्रै हो ? राष्ट्र द्रोह होइन र ?? अझै यिनका पछाडि लागेर हामी कतिन्जेल बेकुफ बन्ने ?? प्रश्न आफै सँग सोधौँ । सत्य तितो हुन्छ ।